Nin FBI Hore uga tirsanaa oo shaqada looga eryay inuu Trump necebyahay - Idman news
Nin FBI Hore uga tirsanaa oo shaqada looga eryay inuu Trump necebyahay
Mohamoud 3 months ago 5 min read
Strzok waxa shaqada FBI laga eryey markii ay caddaatay inuu si shakhsi ah u necebyahay Trump
Bishii Jeeniweri 2007, Peter Strzok wuxuu dhex fadhiyey qol ku yaal xarunta FBI oo wuxuu ka qayb galayey dood lagu gaadhay go’aan laga qaatay arin ku cusbayd. Waxay arintu ahayd baadhintaan ma lagu bilaabi karaa ninka haatan uun loo caleemo saaray madaxtinimada Maraykanka?
Waxa taagnaa su’aalo adag oo ahaa sharciga talaabadani ma waafaqsantahay, yaa ansixiya in baadhitaan noocaas ah la bilaabi karo? laakiin waxa sidoo kale muuqday arimo cad oo aan la dhaafi karin, ayuu yidhi Strzok oo BBC-da la hadlay.
“Waxaan u jeedaa sidee ayaad baadhitaan ugu bilaabi kartaa qof dalka madaxweyne ka ah? Sababta oo ah xataa baabuurta ilaaladiisa ma raaci kartid iska daa diyaaradda madaxweynahee. Si qarsoodi ah kuma gali karti xafiiska madaxweynaha ee Oval Office oo iskama dhigi kartid qof xashiishka ka soo qaadaya.”
Baadhitaanku waabu socday dhawr bilood oo Trump olole ku jiray Strzok na waxaa la siiyey magac af-garasho oo ah eray laga soo qaatay heesta ay qaadaan kooxda Rolling Stones ee la yidhaa Jumpin’ Jack Flash oo ah Crossfire Hurricane.
Ololaha Trump waxa baadhitaanka lagu bilaabay 2016 markii warbixin ka timid London oo ahayd in danjiraha Australia uu kula kulmay qof la taliye u ah Trump goob khamriga lagu cabo oo magaaladaas ku taal kuna yidhi sida la sheegay in Ruushku danaynayo inuu la shaqeeyo oo uu siiyo xog dhaawici karta sumcadda Hillary Clinton.
Strzok waxa xadidayey sharciga FBI ee ku saabsan hubsiinaha ama faaqidaada doorka UK ama socdaalka uu ku tago karo dalkaas. Arin kale ayaa jirtay oo UK aad uga welwelsanayd taas oo ah in ay dhici karto in lagu shaabadeeeyo in ay faraha la gasho arin Maraykanka u gaar ah.
Badhatamihii bishii Sebtember ayaa FBI waxay heshay warar taxane ahaa oo uu diyaariyey sarkaal ka tirsan sirdoonka Ingiriiska ee MI6 oo l ayidhaa Chris Steele, kuwaas oo mar kale tibaaxay in uu jiro xidhiidh qarsoodi ah oo ka dhexeeya ololaha Trump iyo Moscow.
“Run ahaantii wararkaasi wax badan bay sii cadeeyeen oo ah arimo badan oo ah kuwii aanu tuhunsanayn” ayuu yidhi Strzok. “Waxa dhici karta in dulucda arintaasi sax ahayd ama aanay sax ahayn ama aanaan anagu garan karayn. Laakiin guud ahaan sida xogtu wax u tibaaxaysay waxay ahayd wax is haysta oo waafaqsan sidii aan anaguba u haysanay”.
,Xafladdii caleemo saarka Trump ee 2016
Warka Steele ma ahayn xogta keliya ee lagu salaynayey doodaa taagnayd Jeeniweri ee ahayd in baadhitaan lagu bilaabo madaxweynaha qudhiisa (arintaas oo Strzok laftiisu ka soo horjeeday) laakiin arinta warkaasi abuuray ee ah suurtogalnimad ah in Moscow hayso xog lagu eedayn karo Donald Trump ayaa aad u soo shaac baxday doorashadii ka dib.
“Intaad fadhiisato ayaad isku dayeysaa in aad qiimayso xaddiga halistu inta uu leegyahay” ayuu Strzok ku yidhi BBC. “Ta ugu xumi na waxay noqonaysaa in arinta madaxda sare wadeen oo Donald Trump ahaa mushrax daba dhilif ah uu qudhiisu aha basaas uu qortay Kremlin-ku oo u shaqaynayey. Markaa u malayn maayo in midkaayona ay ku soo dhacday in arintaasi suurto gal tahay laakiin se aanaan meesha ka saari karin arintaas u qaadan waaga ah.”
Arinta kale ee suurto galka ahi waxay ahayd in dadka isku xidhayey Moscow iyo ololaha Trump aanay feejignayn, ama sida uu u yidhi Strzok ahaayeen “shakhsiyaad danaystayaal ah oo aan khibrad lahayn oo doonayey in ay meesha lacag ka helaan” oo la xidhiidhayey koox Moscow fadhida oo aan qudhoodu aragti qeexan lahayn oo iyaguna doonaya inay lacag helaan. Haatan wuxuu rumaysan yahay in uu runtii ku soo dhawaaday.
Magaca buugga xusuus qorka Strzok waxaa la yidhaa Compromised waxaanu weli rumaysan yahay in Moscow si uun sir uga hayso Donald Trump.
“Markaad eegto Trump waxaa kaaga muuqanaya inuu leeyahay dhamaan sifooyinka qof dal kale ugu adeegi karo” ayuu yidhi Strzok, waaanu farta ku fiiqay xidhiidhka ganacsi, siduu u jecelyahay hogaamiyeyaasha awoodda badan iyo qabka qudhiisa ku jira ee uu aaminsanyahay in Moscow ay siin karto wax uu u baahan yahay.
“Waxaan rumaysnahay inuu jiro qaab lagu khiyaameeyey. Waanad ogtahay oo waxaan rumaysanahay in arintaasi tahay wax la rumaysan karo”.
Strzok wuxuu ku takhasusay ka hortagga sirdoonka Ruushka, waxaanu tabobar ku qaatay qaab baadhitaanno ay dejisay FBI oo lagu saleeyey dabogalka basaasiinta aadka isku qariya ee Ruushka.
Wuxuu tabaradaa ku bartay in Ruushku adeegsado hab qoto dheer oo samir badan oo sidoo kalena ay wadaan siyaasiyiin, ganacsato iyo arday ay u sahlan tahay in ay sirdoonka dalalka kale dhexgalaan oo ay xataa mararka qaar adeegsadaan maafiyada. “Waa hab aad u kakan oo ay isku maranyihiin awoodda taas oo ka dhigta wax aan la fahmi karin iyo sidoo kale in aan la beegsan karin.”
Strozk oo xirfadiisu ahayd in aanu is muujin ayaa haatan duruuftu ku kaliftay inuu noqdo shakhsiyad la wada garanayo oo lagu kala aragti duwayn yahay. Madaxweyne Trump ayaa dhawaan ku sheegay inuu “cambaar” ku yahay dalka, eraygaas oo uu dhawr goor oo horena ku sifeeyey. Fariimo qoraal ah oo ay is weydaarsadeen isaga iyo qareen ka tirsan FBI oo xidhiidh caashaq ka dhexeeyey ayaa se muujiyey in uu nacayb shakhsi ah u qabo Donald Trump, waxaana ka mid ahaa fariimahaas mid uu ku sheegay in uu 2016-kii isku dayey in Trump la baadho. Markii fariimahaa qoraalka ahi soo baxeen ayaana shaqadii FBI laga eryey.
Strozk wuxuu ku nuuxnuuxsaday in aragtidiisa shakhsiga ah ee uu ka qabo Trump aanay haba yaraateen saamaynin shaqadiisa oo sharciga ka indho saabin. “Qof kasta oo ka tirsan FBI wuxuu leeyahay aragti siyaasadeed oo uu aaminsanyahay, waayo aragnimadaydu waa 20 sano iyo dheraad qof kastaa aragtida isaga u gaarka ah wuxuu kaga tagaa albaabka xafiiska laga galo” ayuu ku dooday. Laakiin Strzok waxa ku hal qabsada dadka taageersan doodda Trump ee ah in “sir doonka dalku” khiyaameeyey oo uu doonayey inuu fashiliyo ololihiisii uu ku guulaystay.
Strzok wuxuu rumaysan yahay in farogelintii Ruushku saamayn weyn ku lahayd natiijadii ka soo baxday doorashadii 2016 waxaanu qirayaa in sirdoonka dalku ku fashilmay in ay fahmaan sida Ruushku u adeegsado baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka ee uu ku gaadho ujeedooyinkiisa siyaasadeed ee farogelinta dalalka kale.
Haatanna wuxuu ka cabsi qabaa in arintu kaba sii darraan doonto tii hore. Strzok wuxuu sheegay in Ruushku 2016 dejiyey qaabab badan oo aanu adeegsan.
Waxa dhici karta in ay doonayeen in Hillary Clinton ku guulaysato doorashadaa oo ay qorshaynayeen in ay markaa dhaawacaan sharciyadda hanaanka doorashada laakiin markii dambe qorshahaa way ka noqdeen markii Trump guulaystay. Haatanna waxa uu rumaysan yahay in Ruushku aanu gacmaha laaban doonin sidaa awgeedna uu u baqayo dimuqraadiyaddii Maraykanka “walaaca aan haatan qabaa waa mid aan noloshayda i soo marin”.
Previous M/weyne Muuse Biixi oo Xilka-qaadis & Magacaabis sameeyay
Next Saudi Arabia oo shaacisey war ku saabsan qorshaha caadiyeynta xiriirka Israel
Diyaarad siday gargaar kala duwan oo Maanta la gaarsiiyey degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bokool
Abdulkadir Isse – YouTube
Agaasimaha Guud Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdulaahi…
Warka Duhur Shabelle TV 18.1.2021
Abdulkadir Isse – YouTube January 18, 2021
Agaasimaha Guud Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdulaahi… January 18, 2021
Warka Duhur Shabelle TV 18.1.2021 January 18, 2021
Diyaarad siday gargaar kala duwan oo Maanta la gaarsiiyey degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bokool January 18, 2021
Total visitors : 18,031